Ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa - Ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta China, ndị na-ebubata ya
MG Pneumatic Automatic Valve Machine na-eji Ngwa Push akpa
Ya na high ogo akpaaka na eletrịkị nwere ọgụgụ isi relays na ọgụgụ isi ngwá maka njikwa, nke Ọhụrụ Ụdị Pneumatic Valve Pikwu okwu Machine bụ ịrụ ọrụ nke ọma, kwụsie ike ma dị mfe iji rụọ ọrụ. Site kpọmkwem pneumatic imewe, igwe na-ewepụ kpamkpam n'ibu eyi, mbubreyor mmezi ihe isi ike nke ukwuu belatara, igwe nwere akpaka akpa Kwaa ọrụ, naanị ndị ọrụ kwesịrị ịrụ ọrụ tinye akpa (akpa akpa) na iji nweta ọrụ nkwakọ ngwaahịa.
Ụdị Valve akpaaka 15-50kg igwe simenti akọrọ aja aja na-ebu ntụ ntụ
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji akpa valvụ na-ekesa ngwaahịa ha, nke jupụtara na akpa akpa valve azụmahịa. Ọrụ nke ngwugwu akpa valvụ bụ iji tụọ ọnụ ahịa ngwaahịa achọrọ n'ime akpa ahụ nke ọma. A na-eji ndị na-ebu akpa valvụ eme ihe n'ụdị ụlọ ọrụ dị iche iche na-akpakọ nkụ, nnukwu ntụ ntụ siri ike na ngwaahịa granular. Ụfọdụ ngwaahịa ndị a na-ejikarị eme ihe bụ ciment, grout, fatịlaịza, ntụ ọka, ọka, mixes refractory, na sugar. Igwe na-ejuputa akpa valvụ ndị a na-eji oghere oghere n'ime akpa ewebata ngwaahịa ahụ. Aka uwe ahụ na-arụ ọrụ dị ka valvụ nlele iji mee ka ngwaahịa ahụ ghara ịchacha n'ime akpa ahụ ozugbo ọ jupụtara.
Igwe nkwakọ ngwaahịa akọrọ nke Valve Port
1.This nkwakọ igwe na-eji kọmputa metering ngwaọrụ, otú ọ nwere ike ibu n'ụzọ ziri ezi, na-arụ ọrụ kwụsie ike na-arụ ọrụ ngwa ngwa.
2. A na-emechi ahụ nke igwe a kpamkpam ma jirikwa oghere dedusting mee ya. Ọdịdị ya nwere ezi uche ma dịgidere ma nwee ike ịghọta mmepụta gburugburu ebe obibi n'ezie
3.This igwe dị obere na olu, dị ala na ịdị arọ na adaba maka ịhazi na ịnọgide na-enwe; E wezụga nke ahụ, ekele maka mechatronics ya, ọ nwere ike ịchekwa ike eletrik.
4.MG usoro nkwakọ igwe nwere ike nkewa n'ime impeller ụdị na Pneumatic ụdị nke na-eji PLC akara dị ka ha ihe onwunwe ichupu mode;
Ngwa 5.Wide: Enwere ike itinye igwe a ọ bụghị naanị na nkwakọ ngwaahịa akọrọ kamakwa na nkwakọ ngwaahịa nke ntụ ntụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ, dị ka ciment, ngwa ngwa akọrọ, uyi efe efe, lime, calcium carbonate, talcum powder, gypsum, bentonite, kaolin, carbon black, alumina, ọkụ ihe ntụ ntụ, granule ihe na na.